Twitter ichavhura matanho matatu matsva ekudzivirira kushungurudzwa pasocial network | IPhone nhau
Twitter ichavhura matanho matatu matsva ekudzivirira kushungurudzwa pasocial network
Mwedzi mishoma yapfuura, Twitter yaive pamiromo yemakambani mazhinji eetekinoroji, makambani akange aratidza kufarira kutora microbloggin social network, asi sekuziva kwedu tese, hapana kana imwe yemakambani yakasimbisa zviri pamutemo kufarira kwavo. Dambudziko guru ravakaona raive iyo yakakwira nhamba yetrolls anofamba akasununguka pa Twitter, nhanho dzisingagamuchirwe kune vazhinji vanobatika. Kubva zvakauya Jack Dorsey sa CEO wekambani makore angangoita maviri apfuura, Dorsey akatarisa kuvhura maficha matsva kuyedza kudzikisira kuvapo kwake pa Twitter, asi zvinoita sekunge vanga vasina kukwana.
Twitter ichangobva kuzivisa kuti ichawedzera matanho matatu matsva ekurwisa kushungurudzwa kunoitwa nevashandisi vazhinji zvichibva mukufungidzirwa kusazivikanwa kwatinowana pasocial network iyi. Chii chimwe ivo vanoda kuita Twitter ive nzvimbo yakachengeteka kune avo vese vashandisi vasati vafunga kuvhura account pa microbloggin social network. Twitter inoda kupedza kushungurudzwa uye kushungurudzwa kunofamba zvakasununguka kuburikidza neshiri yekudyidzana. Kutanga, ivo vachatanga sisitimu nyowani inodzivirira vashandisi vekare vatodzingwa papuratifomu kubva kuvhura account nyowani kuti varambe vachishandisa zvisirizvo.
Patinotsvaga zvemukati, zvawanikwa zvine zvemukati hazvisi kuzoratidzwa, kunyanya yeaakaundi isu atavharira, akanyararidza achinzi kushungurudzwa, kunyangwe ivo vachigona kuona izvo zvakavharwa zvirimo maererano nezvataurwa pamusoro apa, kana vachida. Kuedza kugadzirisa zvemukati zvinoratidzwa pasocial network, Twitter ichavanza mashoma emhando yetweets anoshusha kupesana nemunhu kana kuratidza mwero wekushungurudzwa, kunyangwe senge pachiyero chekutanga, mhando iyi yetweets yakavharwa inogona kuratidzwawo pamushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Twitter ichavhura matanho matatu matsva ekudzivirira kushungurudzwa pasocial network
Apple Inozivisa BeatsX Itsva Kutangisa Kukadzi 10
Iyo Apple Watch ingangoita chete smartwatch inotengeswa